सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले ‘घुस बार्गेनिङ’ गरेकाे , बाहिरियाे अडियाे प्राप्त अडियो संवादमा – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /रोचक/सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले ‘घुस बार्गेनिङ’ गरेकाे , बाहिरियाे अडियाे प्राप्त अडियो संवादमा
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले ‘घुस बार्गेनिङ’ गरेकाे , बाहिरियाे अडियाे प्राप्त अडियो संवादमा
सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले स्वीक कम्पनीको एजेन्टसँग घुसको बार्गेनिङ गरेको अडियो नागरिकले फेला पारेको छ। मन्त्री बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्दा कर्मचारीसँग कुरा नगर्न र आफैसँग कुरा गर्न आग्रह गरेको नागरिकलाई प्राप्त अडियो संवादमा सुन्न सकिन्छ ।
यो उसको लागि हामी आउट अफ ट्याकमा जानेकी तपाइँले भने अनुसार नै जाने त भन्नुस्।
मन्त्री बाँस्कोटाः उनीहरूले नर्मलमा ५० भने
मिश्र:५४, ५५ तपाइँहरुलाइ आउने १५, १६ हामीलाई आउने हामीले नि त अलि अलि त होइन, अब आउट अफ ट्याक जाने हो भने
मन्त्री बाँस्कोटा यो मु…. ले बनाएको त ३५ अर्बको छ नी। यो ३५ अर्ब नी नभएपछि त २७ अर्बको निस्केपछि त २८…….
संवाद सकिन्छ। नगरिकको सम्पर्कमा आएका मिश्रले मन्त्री बाँस्कोटाले सुरुमा दुई अर्ब घुस मागेका थिए। तर कम्पनीको नियम अनुसार प्रतिशतको आधारमा मात्र जाने हो मिल्छ भनेर कुरा गरेको उनले बताए।
आउट अफ ट्याकमा चाही त्यही कुरा गर्न खोजेको मिश्रको भनाइ छ। नागरिकले सम्पर्क गर्न खोज्दा मन्त्री बाँस्कोटाको मोवाइल उठेन। नागरिक दैनिककाे अनलाइनमा पत्रकार सुनिल सापकाेटाले समाचार लेखेका छन् ।